Natiijada Kulan dhexmaray Dowladaha Somaliland iyo Norway oo Arrimo Muhiim ah isla qaatay | Salaan Media
Home Wararka Natiijada Kulan dhexmaray Dowladaha Somaliland iyo Norway oo Arrimo Muhiim ah isla...
Natiijada Kulan dhexmaray Dowladaha Somaliland iyo Norway oo Arrimo Muhiim ah isla qaatay
Oslo (SM)- Dowladaha Somaliland iyo Norway, ayaa ka wada-hadlay sii xoojinta xidhiidhka wada-shaqayneed ee u dhexeeya labada waddan iyo hirgelinta iskaashi hor leh oo dhexmara.
Iskaashiga iyo xoojinta xidhiidhka Labada waddan, ayaa lagaga hadlay Kulan magaalada Oslo ee caasimadda Norway ku dhexmaray Wakiilka Somaliland ee u qaabilsan dalalka Norway iyo Denmark, danjire Maxamed Maxamuud Aadan (Liilan) iyo Haakon Svane oo ah sarkaal sare oo ka tirsan Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Norway (Minister-Councellor).
Kulankan oo salka ku haya Danaha danaha labada waddan, ayaa Safiirka Somaliland ee Norway iyo Denmark wuxuu Haakon Svane uga warramay horumarka Somaliland ka gaadhay dimuqraadiyadda, doorashooyinka iyo inay tahay Jamhuuriyad ku taalla Geeska Afrika oo nabadgalyo ku naaloonaysa, sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska Safiirka Somaliland ee Norway, Danjire Maxamed Liilan.
War-saxaafadeedka oo lagu faahfaahiyey natiijada kulanka labada masuul iyo arrimaha ay diiradda ku saareen, ayaa lagu yidhi, “Labada masuul waxay ka wada-hadleen dhinacyo badan oo dan u ah labada dal ee Somaliland iyo Norway oo ay ku jiraan maalgashi iyo caawimaado dheeraad ah oo Norway u taageerto Somaliland oo lagu tilmaamo dalka keliya waddamada Gobolka Geeska Afrika ugu horreeya dhinacyada dimuqraadiyadda iyo nabadgelyada.
War-saxaafadeedka ka soo baxay safaaradda Somaliland ku leedahay Norway, waxa kale oo lagu yidhi, “Maalinba maalinta ka danbaysa, dunidu ku baraarugaysaa waxa ay dadka reer Somaliland ku guulaysteen oo ah Nabad iyo Xasilooni, taasi oo waddamo badani ku guul-darraysteen.
Warku waxa uu intaas ku daray in kulanka labada masuul lagaga wada-hadlay iskaashiga intii hore ka qoto-dheer oo dhexmara labada waddan iyo inay dowladda Norway taageero wax-ku-ool ah ka geysato doorashooyinka soo socda.
“Waxa laga wada-hadlay Iskaashi mustaqbalka dhow oo ay ku jiraan Doorashooyinka soo socda ee Somaliland ka qabsoomi doona sannadkan 2022,” sidaas ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska danire Maxamed Maxamuud Aadan (Liilan).
Gebo-gabadii waxa warka ka soo baxay xafiiska wakiilka Somaliland ee Norway lagu sheegay inuu jiro Isbeddel hor leh oo dowladda Norway ku doonayso inay ku samayso siyaasaddeeda ku wejahan Somaliland, taas oo lagu tilmaamay inay tahay guul wax ku ool ah oo Qab laxaad leh ka qaadanaysa dedaallada Aqoonsi-raadinta ee Somaliland.